Download Microsoft Izwi Apk Zakamuva Version Lokusebenza Amadivayisi Android - ApkZip.com
Igama le-Microsoft: bhala, hlela bese wabelana ngama-docs ekuhambeni
Ingabe umsebenzi wakho best nge Office, sebenzisa 💡 izici ✍️ nge 👬 yakho
Isilinganiselwa Sokuqukethwe :
Ukulanda (69.00 MB)
4.5 (89.7%) 3,497,308 Amavoti
Insiza ye-Word evela ku-Microsoft ikuvumela ukuba udale, uhlele, ubuke, futhi wabelane nabanye amafayela ngokushesha futhi kalula. Hlela imibhalo enamathiselwe kuma-imeyili, uhlanganyele nethimba lakho futhi ulethe izici ze-Microsoft Office nomaphi lapho uya khona.
Ihhovisi lakho lihamba nawe uma usebenzisa i-Microsoft Word. Uhlelo lokusebenza lweprosesa yezwi lusetshenziswa ngendlela oyifunayo, kungakhathaliseki ukuthi u-blogger, umlobi, intatheli, umlobi wekholomu, umfundi, noma umphathi wephrojekthi osebenza kumadokhumenti.
Izwi lifaka umfundi we-PDF weselula efonini yakho. Hlela imibhalo futhi ufunde ama-PDF noma ama-e-izincwadi ngenkathi uhamba, ngaphambi kokulala noma noma ngabe ufuna.
Dala amadokhumenti, izikripthi, amabhulogi, ukubhala phansi, noma uqale kabusha. Hlela amadokhumenti, izinhlamvu, uqale futhi, noma uqaphele indlela yakho ngamathuluzi aqinile akuvumela ukuba ufeze ukubhala kwakho okuhle kakhulu ngezinketho ezingcono kakhulu zefomethi.
Dala amadokhumenti e-Word, hlela ama-docs futhi uhlanganyele nethimba lakho noma ngabe ukuphi ne-Microsoft Word.
Izici ze-Microsoft Word:
Dala amadokhumenti ngokuqiniseka
• Yakha ama-docs, izabelo, izincwadi, amabhulogi, izikripthi, amanothi, abuye futhi okuningi ngamathempulethi anamuhla ahlelwe kahle.
• Hlela amadokhumenti ngezinketho ezifakiwe zokufometha nezakhiwo ukuze uqaphele imibono yakho bese ubhala ngokubhala.
• Umhleli wedokhumenti ugcina amafomethi kanye nezakhiwo ezihle kakhulu futhi zibukeka kahle, kungakhathaliseki ukuthi iyiphi idivayisi oyisebenzisayo.
Funda, Bhala, futhi Hlela
• Funda ama-docs, ama-PDF, izincwadi, izikripthi, nokuningi kudivayisi yakho ne-Reading View.
• Hlela amadokhumenti kusuka kuma-PDF ngokuguqula nokuphuma kumadokhumenti e-Word ukwenza kalula ushintsho.
• Ukuguqula amadokhumenti ku-PDF emva kokuhlela futhi wabelane ngefayela lakho le PDF ngamathonti ambalwa.
Bambisana Noma ubani, Noma kuphi
• Bambisana ngokuphawula ku-doc yakho eceleni kombhalo oxoxa ngawo.
• Hlela imibhalo njengeqembu bese uhlala phezulu kwezinguquko kumbhalo, ukuhlela, nokufometha.
• Umhleli wedokhumenti kukuvumela ukuthi ubuyekeze ukubuka ama-drafts angaphambilini ngomlando wokuthuthukisa we-Word.
• Bambisana futhi wabelane ngamafayela wedokhumenti ngamathonti ambalwa.
• Lawula izimvume zama-docs futhi ubone ukuthi ubani osebenza kuzo kalula.
• Kopisha amafayela e-Microsoft Word ngqo emzimbeni womlayezo we-imeyli ngefomethi yayo eqinile noma unamathisele ama-PDF akho nama-docs ku-imeyili futhi wenze ukwabelana kube lula.
Landa i-Microsoft Word manje bese uhlela amadokhumenti noma kuphi.
I-OS version: isebenza noma yiziphi izinguqulo ezisekelwe ze-Android futhi zine-ARM-based noma Intel x86 prosesa. Ukusekelwa kwamadivayisi we-Kitkat & Lollipop kuzoqhubeka kuze kufike ngo-Juni 2019
� 1 GB RAM noma ngenhla
Ukuze udale noma uhlele amadokhumenti, ngena ngemvume nge-akhawunti ye-Microsoft yamahhala kumadivayisi anesayizi weskrini encane kunezingalo ezingu-10.1.
Vula isipiliyoni esigcwele se-Microsoft Office nge-subscription ye-Office 365 efanelekayo (bheka i-http://aka.ms/Office365subscriptions) yefoni yakho, ithebhulethi, i-PC, ne-Mac.
Ukubhaliselwa kwe-Office 365 kuthengiwe kusuka kuhlelo lokusebenza kuzokhokhiswa ku-akhawunti yakho ye-Google Play Isitolo futhi kuzovuselela ngokuzenzakalelayo kungakapheli amahora angu-24 ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokubhaliselwe, ngaphandle uma ukuvuselelwa ngokuzenzakalela kukhutshaziwe ngaphambi kwesikhathi. Ungaphatha ukubhalisa kwakho kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho ye-Google Play Isitolo. Ukubhaliselwa akukwazi ukukhanselwa ngesikhathi sokubhalisa esebenzayo.
Lolu hlelo luhlinzekwa yi-Microsoft noma umshicileli wohlelo lokusebenza wesithathu futhi luhambisana nesitatimende sobumfihlo esihlukile kanye nemigomo nemibandela. Idatha enikeziwe ngokusebenzisa le esitolo futhi lolu hlelo lokusebenza lungafinyeleleka ku-Microsoft noma umshicileli wohlelo lokusebenza wesithathu, njengoba kusebenza, futhi adluliselwe, agcinwe futhi asetshenzwe e-United States noma nakwamanye amazwe lapho i-Microsoft noma umshicileli wohlelo lokusebenza abalingani babo noma abahlinzeki bezinsizakalo balondoloza izindawo.
Sicela ubheke i-EULA yeMicrosoft yeMigomo Yesevisi ye-Office ku-Android. Ngokufaka uhlelo lokusebenza, uyavumelana nale migomo nemibandela: http://aka.ms/eula
Ungase Futhi Uthande Lezi Zinhlelo Zokusebenza
Create, edit and collaborate with others on documents from your Android phone or tablet with the Google Docs app. With Docs you can: - Create new documents or edit existing files - Share documents and collaborate in the same document at the same time. - Work anywhere, anytime - even offline - Add...
i-applock - izinhlelo zokusebenza zokukhiya, ukuvala iphini nephethini
adobe acrobat umfundi: pdf umbukeli, umhleli nomdali
umbukeli wedokhumenti - ihhovisi legama, umfundi we-pdf no-xlsx
umfundi we-pdf - umbukeli we-pdf ne-epub, umfundi we-ebook
unqulo wesi arab mahhala 2019 - scan kanye nokususa igciwane, ukuhlanza
ama-password we-wifi wamahhala nama-hotspots nge-instabridge
scan okusheshayo: idokhumenti khulula isithwebuli
umlayishi wesimo se-whatsapp
camscanner - iskena ukuskena pdf
Izinhlelo Zokusebenza Ezintsha Ezithandwayo
umshini wokuqopha othomathikhi - ibhokisi lokubiza
Write SMS By Voice : Write Voice Message Voice SMS
uhlelo lwekhalenda nganoma yikuphi.do - ikhalenda yeGoogle newijethi
ukubuka kuqala kwe-firefox